‘बोक्सी’ आरोपमा शिक्षिका पनि कुटिइन्, जोखाना हेर्ने जमातमा पत्रकार ! | Dainik Sanjal
Home समाज ‘बोक्सी’ आरोपमा शिक्षिका पनि कुटिइन्, जोखाना हेर्ने जमातमा पत्रकार !
‘बोक्सी’ आरोपमा शिक्षिका पनि कुटिइन्, जोखाना हेर्ने जमातमा पत्रकार !
राधाकी आमालाई पिटेर फर्काइयो, बुबालाई दर्शक बनाइयो
यस्तो बेलामा भिडियोमात्रै खिच्नुभयो ? कुटपिट गर्नुहुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्नुभएन ?
अनलाइनखबरको प्रश्नमा पत्रकार चौधरीले भने, त्यहाँ बोल्न सक्ने स्थिति नै थिएन, बोल्यो भने स्थानीयवासीले झम्टिने अवस्था थियो ।’
२०७४ फागुन २७ गते १६:३५ मा प्रकाशित
अनलाई खबर बाट साभर गरियको